Beeraleyda Falastii oo Dhib Badan Kala Kulmaya Yahuuda. (Warbixin) – Shabakadda Amiirnuur
Beeraleyda Falastii oo Dhib Badan Kala Kulmaya Yahuuda. (Warbixin)
January 9, 2020 5:50 am by admin Views: 127
Beeraleyda reer Falastiin ayaa la halgamaya sii wadida waxsoosaarka Ubaxyada tan iyo 1991, waqtigaas oo inbadan oo ka mid ah beeraleyda kale ay isku dhiibeen una weeciyeen dalagyo kale, sababtuna ay tahay xayiraada Yahuuda ay kusoo rogtay lix sano taasoo keentay in la waayo meel loo dhoofiyo.
Inta badan Ubaxyada ayaa waxaa loo dhoofin jiray Yurub dhaqaale wanaagsanna waa ay ka heli jireen beeraleyda Falastiin laakin Yahuuda ayaa sheegtay ineysan macquul ahayn arrintaa.
Xijaazi qudhiisa ayaa lagu qasbay inuu yareeyo dhulkiisa uu ku beero ubax iyo ubax afartan dunn ilaa toban dun oo kaliya, laakiin wali wuxuu u hogaansanyahay dalaggan, kaas oo uu sheegay inuu yahay mid barwaaqo ah isla markaana abuuraya macaash badan ka hor inta aan la xayiran xayiraada 2007.
Xijaazi oo kamid ah beeraleyda Muslimiinta wuxuu u sheegay Al-Jaziira in lagu qasbay inuu yareeyo soo saarka Ubaxa, laakin taa badalkeeda wuxuu u weecday dalagyada kale ee dalka laga cuno. Wuxuu sheegay in xayiraadda Yahuuda ee Gaza ay keentay in suuq geyntu ay ku koobnaato suuqa maxalliga ah.
Xijaazi wuxuu ku qasbanaaday inuu iska dhaafo afartan beerood islamarkaana kala diro sahqaale badan oo ka hawl gali jiray.
Ubaxyada adduunka lagu iibiyo, waxay reer Gaza uga jireen kaalinta labaad laakin wuxuu sheegay in Yahuuddu ay lumisay dowrkaasi.
Wuxuu nasiib darro ku tilmaamay in Yahuudu ay dowladda Kenya u suura galisay iney Ubaxyo u dhoofiso wadamadii ay Falastiiniyiintu ka iibsan jireen oo ay kamid tahay Holand.
Sida laga soo xigtay beeraleygan reer Falastiin, Nederland waxay isku dayday inay dib u soo nooleyntooda wax soo saarka ee Gaza mar labaad 2008 iyo horraantii 2009, laakiin dadaalkeedii ahaa in ay riixdo Yahuudda si loo fududeeyo hannaanka dhoofinta ayaa lagu guuldareystay.
Sida laga soo xigtay xogta Wasaaradda Beeraha, beeraleyda Gaza waxay u dhoofin jireen qiyaastii lixdan milyan oo ubax sanadkiiba Yurub, laakiin sannadkii 2012 dhoofintu hoos bey u dhacday waxayna noqotay 5 milyan oo kaliya, ka hor inta aysan dhoofinta gabi ahaanba istaagin sannadkii 2014.
Beeraleydu waxay sheegeen in aan lasoo koobi karin dhibka ay Yahuuda kala kulmeen, kaasoo ay uga ashtakoonayaan Allaah Subxaanahu Watacaalaa.
Xijaazi oo ah milkiilaha beerta ugu weyn ee Qaza – wuxuu intaasi ku daray in lagala dagaalamay wax yaabaha lagu horumariyo beeraha ee ay dibadda ka dalbadaan, taasoo ku keentay in shey walba oo ay u baahdaan ay ku bixiyaan qiimo laba jibbaaran.
Dadka Falastiin 80% waa kuwa dan yar ah oo u nuglaaday go’doominta Yahuuda, waxaana in badan oo kamid ah ay ahaayeen kuwa noloshooda maareeya oo gacsi leh, balse duullaanka dhanka dhaqaalaha ee lagu hayo ayaa ku kallifay iney hey’ado shisheeye gacmaha u hoorsadaan.